Nijanona teo amin'ny fahalavoan'ny olombelona isika tamin'ny herinandro lasa, fahalavoana izay nateraky ny fahotan'ireo ray aman-drenintsika voalohany. Ny amin'ity herinandro ity dia famintinana vetivety ny telovolana manontolo. Handray anankiray isan'andro amin'ireo fanekena voalohany mantsy isika, dia ireo izay maneho ny fahamarinana ankehitriny mikasika ilay fanekena tena izy nosoniavina teo Kalvary tamin'ny ràn'i Jesôsy, ilay fanekena ifanaovantsika amin'ny Tompontsika amin'ny maha-Kristianina antsika.
Hatombontsika amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Noa ho famonjena azy sy ny fianakaviany tsy ho azon'ny fandringanana izany. Rehefa izay dia hojerentsika ny fanekena natao tamin'i Abrahama, fanekena manan-danja sy feno teny fikasana ho antsika rehetra; avy eo dia ny fanekena tao Sinay sy ny maha-zava-dehibe ny zavatra voalazany; ary farany dia hojerentsika ny amin'ilay fanekena vaovao, dia ilay iray izay tondroin'ireo hafa rehetra. Mbola hodinihintsika lalindalina kokoa ao anatin'ny herinandro maro manaraka ireo rehetra ireo fa topy maso kely monja no ataontsika mandritra ity herinandro ity.
Indray mitopy maso: Inona ny hevitry ny teny hoe "fanekena"? Inona avy no mandrafitra izany? Inona ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Noa? Inona ny fanantenana hita ao anatin'ny fanekena natao tamin'i Abrahama? Inona ny anjara asa tanan'ny finoana sy ny asa eo amin'ny fanekena? Moa ve fifanarahana fotsiny ny fanekena sa misy lafiny ara-pifandraisana ao anatiny? Inona ny zava-dehibe indrindra ao amin'ilay "fanekena vaovao"?
Ireo zavatra fototra ao amin'ny fanekena (Gen. 17:2)
"Fa izaho hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra."- Gen. 17:2.
"Ny teny hebreo nadika hoe 'fanekena' (izay miseho in-287 eo ho eo ao amin'ny TT) dia ny hoe berith. Azo adika ihany koa hoe "didim-pananana" na "hafatra farany" izany. Tsy dia mazava loatra ny niavian'izany teny izany, fa ny heviny dia 'natao hampifandraisana ankolafy anankiroa. 'Nampiasaina hoentina milaza karazam-pifandraisana' maro samy hafa koa anefa izany, fifandraisana eo amin'ny olona samy olona sy fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Fifandraisana tsotra no ampiasana azy eo amin'ny olona samy olona, fa ara-pivavahana kosa no asany rehefa eo amin'Andriamanitra sy ny olona ilay fanekena. Ny fampiasana azy ara-pivavahana dia endrika mitovy amin'ilay fampiasana azy tsotra ihany, saingy manana heviny lalindalina kokoa."- "Covenant (OT)," The International Standard Bible Encyclopedia, revised edition (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979), J. Arthur Thompson, b. 1, t. 790.
Tahaka ny fanekena amin'ny fanambadiana, dia sady fanekem-pifandraisana no fanekem-pifanarahana no faritan'ny fanekena araka ny Baiboly. Ahitana ireto zavatra fototra ireto ny fanekena ara-Baiboly amin'ny maha-fifanarahana azy:
1. Miaraka amin'ny fianianana no anambaran'Andriamanitra ny teny fikasan'ny fanekena (Gal. 3:16; Heb. 6:13, 17)
2. Ny adidy ateraky ny fanekena dia ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra araka izay aseho ao amin'ny Didy folo (Deo. 4:13)
3. Ny fomba hoentina manatanteraka ireo adidy amin'ny faneken'Andriamanitra dia amin'ny Kristy sy ny drafi-panavotana (Isa. 42:1, 6).
Jereo izay zavatra telo voatanisa etsy ambony (ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny fankatoavantsika ary ny drafi-panavotana). Ahoana no fahitanao ireo zavatra ireo eo amin'ny fiarahanao mandeha manokana amin'ny Tompo. Manorata andalana milazalaza ny fomba fisehon'izy ireo eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao.
Ireo tandindona tamin'ny asa fisoronana no nampianarana ny olona mikasika ny drafi-panavotana iray manontolo ao amin'ny TT. Tamin'ny alalan'ireo tandindona ireo no nianaran'ireo patriarika sy ireo mpaminany nampiasa ny finoany ilay Mpanavotra ho avy. Tamin'ny alalan'ireo fombafombam-pivavahana ireo no nahitan'ny mpanota nibebaka famelan-keloka tamin'ny fahotany sy fanafahana tamin'ny fahamelohany. Dia toy izany no nihazonana ireo fitahian'ny fanekena ka nitohy hatrany ny fitomboana ara-panahy - ny famerenana indray ny endrik'Andriamanitra teo amin'ny fiainana na dia tsy mahomby ny taranak'olombelona indraindray eo amin'ny fanatontosana ny anjarany ao anatin'ny fifarahana.
Na dia misy aza ny fanekena ifanaovan'ny olona, dia ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona no tena ampiasana ny teny hoe "berith" ao amin'ny Baiboly hebreo. Raha ny maha-Izy an'Andriamanitra no jerena, ary ny maha-isika antsika raha mitaha Aminy, dia karazam-pifandraisana toy inona no asehon'izany fanekena izany?
Fanekena natao tamin'ny Noa (Gen. 6:18)
"Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao; ary hiditra ao anatin'ny sambo-fiara hianao sy ny vadinao aman-janakao mbamin'ny vinantonao vavy miaraka aminao."- Gen. 6:18.
Ao amin'io andininy etsy ambony io no voalohany isehoan'ny teny hoe "fanekena" ao anatin'ny Baiboly, ary ao anatin'io tontolon-kevitra io, dia vao avy nilaza tamin'i Noa ny amin'ny fanapahan-keviny hanimba ny tany Izy noho ny fahabetsahan'ny ota sy ny fipariahany tsy an-kijanona. Na dia Safodrano manerana izao tontolo izao aza no fomba isehoan'io fandravana io, dia tsy nafoin'i Jehôvah ny tontolo izay nohariany. Mbola manohy hatrany ny fifandraisam-panekena izay napetrany taorian'ny fahalavoana lzy. Ilay "Izaho izay Izy" nanao izany fanekena izany no fototra iorenan'ny fiarovana an'i Noa. Amin'ny maha-Andriamanitra mpitana ny fanekena Azy no nampanantenany fa hiaro ny ankohonana izay vonona hivelona amin'ny fifandraisana feno fanoloran-tena Aminy Izy, fifandraisana izay miseho amin'ny fankatoavana izany,
Nandeha ila ihany ve ny fanekena natao tamin'ny Noa? Tsarovy fa ankolafy roa no voakasiky ny fanaovana fanekena. Nanana ny anjara asa notanany ve i Noa tao anatin' izany fanekena izany? Inona ny lesona ho antsika ao amin'ny valin'izany fanontaniana izany?
Nambaran'Andriamanitra tamin'i Noa fa hisy ny safodrano ka ho rava izao tontolo izao. Nanao fifanarahana taminy anefa Andriamanitra, izay nampanantenany an'i Noa, fa hamonjy azy sy ny fianakaviany Izy. Tsy zavatra maivamaivana izany, satria raha tsy nitana ny teny nomeny Andriamanitra dia ho ringana niaraka tamin'izao tontolo izao ihany i Noa na inona na inona nataony.
Nilaza anefa Andriarnanitra fa hanao "fanekena" amin'i Noa. Maneho io teny io fa mikasa hanatanteraka izay nekeny hatao ny olona iray. Tsy fanambarana entin'ny fahataitairana fotsiny izany fa arahin'ny fanoloran-tena mihitsy. Andeha atao hoe nilaza izao teny izao Andriamanitra: "Noa a, horavana amin'ny alalan'ny safodrano lehibe izao tontolo izao, ka mety hamonjy anao Aho na tsy hahavoavonjy anao koa. Na izany aza dia ataovy itsy sy izaroa dia ho hitantsika eo ihany izay hitranga. Tsy manome antoka na inona na inona anao anefa Aho." Ny fanambarana toy izany dia tsy mba fahita ao anatin'ny kazarana antoka sy fampanantenana fahita ao anatin'ny teny hoe fanekena.
Misy olona sasany milaza fa tsy nanerana izao tontolo izao ny safodrano tamin'ny andron'i Noa fa tamin'ny faritra sasany fotsiny ihany. Raha izany ary, raha ny tontolon-kevitry ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny Gen. 9:15 no jerena (jereo koa ny Isa. 54:9), isaky ny misy tondra-drano amin'ny faritra anankiray hafa (ary toa misy hatrany izany dia voadika hatrany izany ny teny fikasan'Andriamanitra. Etsy andanin'izany anefa, manaporofo ny fahamarinan'ny teny fikasan'Andriamanitra ny tsy fisian'ny safodrano lehibe hafa manerana izao tontolo izao. Inona ary no ambaran'izany amintsika mikasika ny fahafahantsika mitoky amin'ny teny fikasany?
Ny fanekena natao tamin'ny Abrama (Gen. 12:3)
"Ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany."- Gen. 12:3.
Vakio ny Gen. 12:1-3. Tanisao ireo teny fikasana manokana nataon'Andriamanitra tamin'i Abrama.
Mariho fa ao anatin'ireo teny fikasana ireo no ilazan'Andriamanitra amin'i Abrama hoe: "Aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany"-and. 3. Inona ny hevitr'izany? Ahoana no nitahiana ny firenena rehetra ambon'ny tany tamin'ny alalan'i Abrama? Jereo ny Gal. 3:6-9. Ahoana no ahitanao ny teny fikasana ny amin'i Jesôsy ilay Mesia ao amin'io teny fikasany io? Jereo ny Gal. 3:29.
Ao anatin'io fanambarana voarakitra an-tsoratra voalohany natao tamin'i Abrama io no nampanantenan'Andriamanitra fa hanorina fifandraisana akaiky sady maharitra aminy Izy, na dia mbola tsy nampiasa ny teny hoe "manao fanekena" akory aza. Tao aoriana vao misy filazana mivantana fa hanao fanekena aminy Andriamanitra (Gen. 15:4-21; Gen. 17:1-14). Izao aloha dia fifandraisana manan-danja lehibe eo Aminy sy ny olombelona no atolony. Ny "h... Aho" miverimberina ao amin'ny Gen. 12:1-3 dia mampiseho ny halalina sy ny halehiben'ny fanomezana sy ny teny fikasan'Andriamanitra.
Ankoatra izany dia baiko tokana kanefa nizaha toetra azy no azon'i Abrama dia ny hoe "mandehana". Tamim-pinoana no nankatoavany (Heb. 11:8), fa tsy ny hahatanteraka ireo fitahiana nampanantenaina. Setrin'ny finoany ilay fifandraisam-pitiavana izay nirin'Andriamanitra haorina ny fankatoavany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia efa nino an'Andriamanitra i Abrama, efa natoky Azy izy ary efa nino ny teny fikasany. Tsy maintsy ho izany no izy, raha tsy izany dia tsy ho nandao velively ny fianakaviany sy ny tanindrazany izy ka handeha ho any amin'izay tany tsy mbola fantany akory. Naneho ny finoany teo amin'ny olona sy ny anjely ny fankatoavany.
Na tamin'izany andro izany aza i Abrama dia efa naneho ny fototry ny fifandraisana misy eo amin'ny finoana sy ny asa. Vonjena amin'ny finoana isika, dia finoana izay miseho eo amin'ny asa fankatoavana. Ny fampanantenana ny famonjena no tonga aloha, vao manaraka ny asa. Tsy misy ny fifandraisam-panekena sy ny fitahiana raha tsy misy fankatoavana, io fankatoavana io dia vokatry ny finoana teo anatrehan'izay efa nataon'Andriamanitra. Ny finoana toy izany no manazava ilay foto-kevitra ao amin'ny 1 Jao. 4:19 manao hoe: "Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha."
Vakio ny Gen. 15:6. Ahoana no anehoan'io andininy io, amin'ny fomba maro, ny fototry ny teny fikasan'ny fanekena rehetra? Nahoana izany fitahiana izany no sarobidy indrindra amin'ny fitahiana rehetra?
Ny fanekana natao tamin'ny Mosesy (Eks. 6:1-8)
Vakio ny Eks. 6:1-8 ary valio ireto fanontaniana ireto:
1. Inona ny fanekena resahin'i Jehôvah eto? Jereo ny Gen. 12:1-3
2. Ahoana no maha-fanatanterahany ny anjarany amin'ny teny fikasan'ny fanekena ny Eksodosy na ny fahafahana?
3. Inona amin'izay nampanantenainy ny olona eto no hitanao fa mifanindran-dalana amin'izay nampanantenainy an'i Noa talohan'ny Safodrano?
Taorian'ny fahafahana, dia nandray ny fanekena tao Sinay ny Zanak'Isiraely, izay nomena tao anatin'ny tontolon-kevitry ny fanafahana tamin'ny fanompoana (Eks. 20:2) ary mirakitra ireo sorona ataon'Andriamanitra ho fanavotana sy ho farnelana ny fahotana. Araka izany dia mitovy tamin'ny lasa rehetra izany, dia fanekem-pahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra izay mahatratra ny olony.
Nanantitrantitra tamin'ny fomba maro ireo zavatra nisongadina tamin'ny fanekena natao tamin'i Abrahama io fanekena io:
1. Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny fomba manokana amin'ny olony (ampitahao ny Gen. 17:7, 8 sy ny Eks. 19:5, 6).
2. Ho tonga firenen-dehibe izy ireo (ampitahao ny Gen. 12:2 sy ny Eks. 19:6)
3. Notakina ny fankatoavana (ampitahao ny Gen. 17:9-14 sy ny Gen. 22:16-18 ary ny Eks. 19:5).
"Mariho ny filaharan'ny toe-javatra: mamonjy ny Isiraely aloha i Jehôvah, vao manome ny lalany hotandremanlzy ireo. Mitombina koa izany ho an'ny filazantsara: manafaka antsika amin'ny fahotana i Kristy (jereo ny Jao. 1:29; 1 Kor. 15:3; Gal. 1:4) izay vao mamelona ny lalàna ao anatintsika (Gal. 2:20; Rom. 4:25; 8:1-3; 1 Pet. 2:24).- SDABC, b.1, t. 602.
Vakio ny Eks. 6:7. Inona ny teboka voamarika voalohany ao amin'ny fizarana voalohany amin'io andalan-teny io, raha milaza Andriamanitra fa ho olony izy ireo ary Izy ho Andriamaniny? Mariho ny zava-misy eto. Ho zava-dehibe amin'Andriamanitra izy ireo ary Izy hanan-danja ho azy ireo. Tsy hoe te hanana fifandraisana amin'ny fomba manokana aminy fotsiny Andriamanitra fa tiany koa izy ireo mba hifandray Aminy amin'ny fomba manokana. Tsy karazam-pifandraisana sahala amin'izany ve no tian'Andriamanitra hananana miaraka amintsika amin'izao andro izao? Moa ve ny ampahany voalohany amin'ny Eks. 6:7 mamaritra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sa ianao ilay olona manana ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokim-piangonana fotsiny? Raha eny ny valinteninao ho amin'ny ampahany voalohany amin'io fanontaniana io dia omeo ny antony.
Ny fanekena vaovao (Jer. 31:31-33)
Ireo no andininy ao amin'ny TT miresaka voalohany indrindra ny amin'izay antsoina hoe "fanekena vaovao". Ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fiverenan'ny Isiraely avy amin'ny fahababoana no ahitana azy, miresaka ny amin'ireo fitahiana horaisin'izy ireo avy amin'Andriamanitra izany. Tahaka ny tamin'ireo hafa rehetra ihany, Andriamanitra no mitarika ny fanekena ary mbola lzy koa no hanatanteraka izany noho ny fahasoavany.
Mariho ihany koa ny teny ampiasaina eto. Milaza ny Tenany ho vadin'izy ireo Andriamanitra; ambarany ao ny amin'ny hanoratany ny lalàny ao am-pon'izy ireo, ary ampiasainy ny teny nampiasainy tamin'ny fanekena nataony tamin'i Abrahama, manao hoe: "ho Andriamaniny Aho, ary izy ireo ho oloko". Araka izany, toy ny taloha ihany, dia tsy fifamatorana araka ny fifanarahana ao anatin'ny lalàna fotsiny, toy ny any amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny fanekena, fa mahakasika zavatra mihoatra izany.
Vakio ny Jer. 31:33 ary ampitahao amin'ny Eks. 6:7 izay milaza amin'ny an-tsipiriany ny fanekena natao tamin'ny Isiraely. Inona ihany koa ny hevitra fototra aseho eto? Inona no tian'Andriamanitra hatao amin'ny olony?
Vakio ny Jer. 31:34 ary ampitahao amin'ny Jao. 17:3. Inona ny zavatra fototra ataon'i Jehôvah eto izay mametraka ny fototr'io fifandraisana io?
Ao amin'ny Jer. 31:31-34 dia mbola hita hatrany ireo zavatra roa tao amin'ireo fanekena teo aloha, dia ny fahasoavana sy ny fankatoavana. Hamela ny helok'izy ireo Andriamanitra, hanorina fifandraisana amin'izy ireo koa, ary handrotsaka ny fahasoavany amin'ny fiainany. Vokatr'izany dia hankatò Azy ny olona; tsy amin'ny fomba nentim-pahazarana sy mandeha ho azy fotsiny, fa noho ny fahalalany sy ny fitiavany Azy ary koa noho ny faniriany hanompo Azy. Izany no votoatin'ny fifandraisam-panekena izay tadiavin'i Jehôvah amin'ny olony.
Ahoana no fahazoanao ny hevitry ny hoe lalàna voasoratra ao am-po? Milaza ve izany fa manjary araka izay heverin'ny olona sy mifanaraka amin'ny tenany manokana ny fampiharana ny lalàna, dia zavatra natao horaisina sy hampiharina araka izay mifanaraka amin'ny toe-pontsika isam-batan'olona? Sa zavatra hafa noho izany no tiany holazaina? Raha izany, dia inona izany?
Vakio ny"Abrahama tao amin'ny tany Kanana", tt. 112-120 ao amin'ny PM; sy ny "Nanampy azy ireo ny mpaminanin'Andriamanitra", tt. 461-463 ao amin'ny MM.
"Ny zioga izay mamehy eo amin'ny fanompoana dia ny lalàn'Andriamanitra, dia ilay lalàna lehibe momba ny fitiavana naseho tao Edena, nambara tao Sinay, ary soratana ao am-po amin'ny alalan'ny fanekena vaovao, lalàna mifehy ny olombelona hanatanteraka amim-pitiavana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha avela hanaraka ny fironana ao amintsika isika, sy handeha amin'izay hitarihan'ny sitrapontsika, dia ho latsaka ao amin'ny laharan'i Satana ka hanjary hitovy toetra aminy. Noho izany dia fefen'Andriamanitra amin'ny sitrapony izay ambony sy mendrika ary manandratra isika. Tiany raha raisintsika amim-paharetana sy amim-pahendrena ny adidy eo amin'ny fanompoana. Kristy mihitsy no nitondra ny ziogam-panompoana tao amin'ny maha-olombelona azy. Hoy izy: "Ny hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô , no sitrako; ary ny lalànao no ato anatiko"- Sal. 40:8, "Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'Izay naniraka Ahy"- Jao. 6:38. Ny fitiavana an'Andriamanitra, ny hafanam-po ho an'ny voninahiny, sy ny fitiavana ny taranak'olombelona lavo, no nitarika an'i Jesôsy hankety an-tany hijaly sy ho faty. lo no hery nifehy ny fiainany. Io foto-kevitra io no baikoiny ho raisintsika."- IFM, t. 347.
1. Tohin'ny fanekena natao tamin'i Adama ve sa zavatra vaovao ny fanekena natao tamin'i Noa sy i Abrama sy i Mosesy ary tamintsika? Ampitahao ny Gen. 3:15; Gen. 22:18 ary ny Gal. 3:8, 16.
2. Nahoana no zava-dehibe ny lafiny fifandraisana ao amin'ny fanekena? Izany hoe, azonao atao ny manana fifamatorana amin'ny fifanarahana ara-dalana, dia "fanekena” amin'olona iray, tsy misy fifampikasohana amin'ny tena manokana. Tsy izany karazam-pifanarahana izany anefa no tadiavin'ny Tompo ao amin'ny fifandraisam-panekeny amin'ny olony. Inona no anton'izany? Ifanakalozy hevitra"
3. Amin'ny lafiny inona no maha-ohatra tena mety ny fanambadiana entina ilazana ny fanekena? Ary amin'ny lafiny inona ny fanambadlana no tsy mahaseho izay fonosin'ny fanekena?
FAMINTINANA: Nanapaka ny fifandraisan'ny mpahary tamin'ny taranak'olombelona tamin'ny alalan'ireo razambentsika ny fidiran'ny fahotana. Mitady ny hamerenana izany fifandraisam-pitiavana izany indray Andriamanitra amin'izao fotoana izao, amin'ny alalan'ny fanekena. lo fanekena io dia sady manana hevitra fifandraisana voatokana eo amin'Andriamanitra sy isika tahaka ny fifamatoram-panambadiana no fifanarahana ho famonjena antsika sy hampifandrindrana antsika amin'Ilay Mpanorina azy. Andriamanitra, izay nohetsehin'ny fitiavany lehibe antsika, no Mpanorina io fifandraisam-panekena io. Amin'ny teny fikasana feno fahasoavana sy ny asam-pahasoavana no hitaomany antsika hanana firaisana Aminy.